5 ndị ​​iro nke mmekọrịta | Bezzia
5 ndị ​​iro nke mmekọrịta
Maria José Roldan | 13/01/2022 22:46 | Mmekọrịta
Mmekọrịta di na nwunye, dị ka ọ na-eme na mmekọrịta ndị ọzọ dị n'etiti ndị mmadụ, ọ pụrụ ịdịtụ mgbagwoju anya. O nwere ike ime na ihe niile na-aga nke ọma, njikọ ahụ na-esikwa ike kwa ụbọchị ma ọ bụ na ụfọdụ ndị iro na-abata nke ji nwayọọ nwayọọ na-emebi mmekọrịta ahụ e kwuru n'elu.
N'isiokwu na-esonụ, anyị na-ekwu maka ihe ndị na-emekarị ma ọ bụ ihe kpatara mmekọrịta nwere ike ịghọ esemokwu na na ha nwere ike imezu ya.
1 Nkwurịta okwu ọjọọ
2 Ndabere mmetụta uche
3 Mmetụta uche
4 Enweghị ntụkwasị obi
Nkwurịta okwu ọjọọ
Enweghị nkwurịta okwu na di na nwunye. ebe ọ bụ na ọ bụ ogidi isi nke ọ dabere na ya. Akụkụ dị mkpa nke di na nwunye ahụ aghaghị igosipụta mmetụta ha na-enwe mgbe nile ma ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ bụ ihe dị mma na ọgụ na esemokwu na-amalite ka oge na-aga. Ọ dị mma maka ọdịmma nke di na nwunye ahụ ịnọdụ ala n'ụzọ dị jụụ na nke dị jụụ ma kwuo ihe dị gị n'obi.
Ndabere mmetụta uche
Ọzọ n'ime ndị iro maka di na nwunye bụ ndabere mmetụta uche. Ọ pụghị ịbụ na obi ụtọ nke onwe onye na-adabere mgbe nile n'ebe onye ọzọ nọ. Ndabere mmetụta mmetụta uche na-eme ka mmekọrịta dị mma na di na nwunye ahụ ghọọ nsị. Ịhụnanya dị n'ime di na nwunye ahụ ga-enwere onwe ya na enweghị ụdị njikọ ọ bụla.
Mgbanwe mmetụta uche bụ ihe ọzọ n'ime nnukwu ndị iro nke di na nwunye. N'ọnọdụ dị otú ahụ, otu n'ime ndị na-emekọ ihe ọnụ na-anabata ọtụtụ ebubo iji mee ka onye òtù ọlụlụ nọrọ ha nso. Nghọta a nwere mmekọrịta chiri anya na ndabere mmetụta uche a hụrụ n'elu. Enweghị ike ịnabata n'ọnọdụ ọ bụla na otu n'ime ndị otu di na nwunye na-eji mkpagharị mmetụta uche na-achịkwa onye nke ọzọ.
Enweghị ntụkwasị obi
Ntụkwasị obi bụ, yana nkwurịta okwu nke ọma, otu n'ime isi ihe dị na di na nwunye ahụ. Enweghị ntụkwasị obi n'ebe onye nke ọzọ nọ na-eme ka mmekọrịta ahụ ji nwayọọ nwayọọ daa. N'ọtụtụ ọnọdụ, enweghị ntụkwasị obi na-apụta n'ihi ụgha nke otu n'ime nnọkọ nke di na nwunye na-eji mgbe niile.
N'ime di na nwunye ọ bụla, ụfọdụ ekworo sitere n'okike pụrụ ime nke na-adịghị etinye mmekọrịta ahụ e kwuru n'elu n'ihe ize ndụ. Nsogbu buru ibu na ha bụ na ha na-amanye na ekworo pathological. Ụdị ekworo a bụ nnukwu onye iro maka mmekọrịta ọ bụla ma bụrụ isi iyi nke esemokwu na ọgụ na-ebibi ya.
Na nkenke, Ọ dịghị onye kwuru na mmekọrịta bụ ihe dị mfe. Ọ bụ mmekọrịta dị n'etiti mmadụ abụọ na ha ga na-aga n'ihu n'ahịrị maka ihu ọma iji nweta ụfọdụ ọdịmma na obi ụtọ. Enwere usoro ihe dị iche iche ga-adịrịrị ka mmekọrịta ahụ ghara ịda mbà, dị ka nkwanye ùgwù, ntụkwasị obi, nkwurịta okwu ma ọ bụ ịhụnanya. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ dị mkpa igbochi ụfọdụ ndị iro ịpụta ebe ọ bụ na ha nwere ike ịkpalite esemokwu ndị na-abaghị uru maka ọdịnihu dị mma nke di na nwunye ma ọlị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » 5 ndị ​​iro nke mmekọrịta
Ngwọta eke 5 iji gwọọ akara aka